Xaqiiqda Cusub ee COVID Markaad u soo duusho Mareykanka waa 20 sano oo Xabsi Federaal ah oo loogu talagalay afduubka ama xadgudubyada maaskaro
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Xaqiiqda Cusub ee COVID Markaad u soo duusho Mareykanka waa 20 sano oo Xabsi Federaal ah oo loogu talagalay afduubka ama xadgudubyada maaskaro
Airlines • Aviation • Jebinta Wararka Safarka • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
COVID -19 Kala duwanaanshaha Delta - Maaskaro ilaa Ameerika!
Sida laga soo xigtay FAA, 4,385 warbixinno rakaab oo aan sharciyeysnayn ayaa lagu xeray gudaha Mareykanka sannad gudihiis. Middaas, 3,199 waa warbixinno dhacdooyin la xiriira maaskaro. Faragelinta shaqaalaha diyaaraddu waa dembi culus oo culus, laakiin miyay tahay inuu noqdo dambi weyn sida uu dhigayo Xeerka Waddaniga oo leh xabsi ilaa 20 sano ah? Madaxweynaha Xuquuqda Waraaqaha ee fadhigiisu yahay Maraykanka Paul Hudson sidaas uma malaynayo.
Ha iloobin fogeynta bulshada markaad raaceyso duullimaad gudaha ah gudaha Mareykanka.
Rakaabka diidaya xeerarka hadda jira oo qaylinaya inta uu duulimaadka ku jiro waxaa laga yaabaa in lagu maxkamadeeyo Xeerka Partriot oo wajahaya 20 sano oo xabsi federaal ah.
Shaqaalaha ka shaqeeya duulimaadyada Mareykanka waxaa tababara isla dadka tababara ilaalada xabsiga-taas oo aan ahayn isku dayga dejinta.
Samada saaxiibtinimo ee Mareykanka laga yaabee inaysan haba yaraatee noqon mid saaxiibtinimo leh sidii ay ahaan jireen waqtiyadii wanaagsanaa ee PAN AM.
Federal Air Marshals ayaa baraya adeegayaasha duulimaadka sidii loola tacaali lahaa halista sii kordheysa ee rakaabka noqda dagaalyahan iyo rabshado, badanaaba ka soo horjeeda xeerarka maaskaro wajiga.
Xaddidaadyada sida caadiga ah lagu dhaqo duullimaadyada caalamiga ah, oo ay ku jiraan kuraasta dhexe oo furan, jahawareerka bulshada ee diyaaradaha, iyo xeerarka tallaalka, inta badan ma aha kuwo dhaqan gala duulimaadyada gudaha ee Mareykanka.
Rakaab badan oo gudaha ah oo ku nool Mareykanka ayaa diida inay raacaan xeerarka maaskaro-xidhka sababo la xiriira siyaasadda, diinta, iyo qaar sababo caafimaad awgood. Tani waxay keenaysaa dhacdooyin aad u tiro badan, kuwaas oo lagu wargeliyo Maamulka Duulista Hawada ee Federaalka (FAA)
Duulimaadka da'da COVID-19 ayaa walwal ku ah rakaabka iyo shaqaalaha, waxayna dhalisay 3,199 dhacdooyin la xiriira maaskaro oo loo gudbiyay FAA. Iyadoo la tixgalinayo kaliya 4,385 warbixinno rakaab oo aan nidaam lahayn ayaa la xareeyay sannad gudaheed, tani waa tiro aad u badan.
Si loo xakameeyo rakaabka, waxaa Golaha looga dooday in lagu ciqaabo dhacdooyinka la xiriira rakaabka isla darnaanta afduubka. Xeerka Patriot Act ayaa la dhigay Maraykanka si looga jawaabo weerarada argagixisada, ee looma jawaabin rakaab cabanaya. Ku xadgudubka Xeerka Waddanigu wuxuu la imanayaa 20 sano oo xabsi federaal ah.
Paul Hudson, Madaxweynaha Xuquuqda Warqadaha, wuxuu ahaa a u doodaha daacadda ah xuquuqda rakaabka oo uu leeyahay ku filan ayaa ku filan.
Faallooyinka ay FlyersRights.org u gudbinayaan Guddi -hoosaadka Duulista Hawada ee Kordhinta Tirada Shilalka Diyaaradaha
Kordhinta dhacdooyinka rabshadaha ee socdaalka hawada ayaa ah arrin culus oo u baahan xal. Dhageysiga guddi -hoosaadka ayaa ka faa'iideysan doona dhageysiga aragtida rakaabka. FlyersRights.org ayaa u gudbisay Waaxda Gaadiidka codsi xeer-dejin ah bishii Ogosto 2020 si loo amro xirashada maaskaro ee safarka hawada. FlyersRights.org waxay ahayd ururka ugu horreeya ee u ololeeya tallaabooyinka yaraynta COVID si looga dhigo safarka hawada mid nabdoon.
Marka loo eego xogtii ugu dambeysay ee FAA, dhacdooyinka la xiriira maaskaro ayaa sheegaya 73% dhammaan dhacdooyinka ay soo sheegeen shaqaalaha markabka 2021. Isla mar ahaantaana, dhacdooyin aan la xirnayn maaskaro ayaa hoos u dhacay, FAA-na waxay ka badan labanlaabantay tirada baaritaanno. FlyersRights.org waxay soo jeedinaysaa xalalka soo socda si loo yareeyo tirada khalkhalka la xiriira maaskaro ee diyaaradaha:
Hirgelinta nidaamka kaarka huruudda ah ee qofka rakaabka ah la siinayo digniin qoraal ah iyo awoodda uu cabasho qoraal ah ugu diri karo duuliyuhu ama diyaaraddu si ay u noqoto dejin.
Xaqiiji in shaqaalaha diyaaraddu laftoodu u hoggaansamaan oo ay si joogto ah u xoojiyaan xeerarka maaskaro.
U oggolow fududeyn aad u weyn si aad u hesho qaanuunka maaskaro caafimaad ka -reebitaan iyo naafonimo oo sharci ah.
Hirgeli tallaabooyin yareyn COVID oo weyn, oo ay ku jiraan fogeynta bulshada iyo hubinta heerkulka. Fogeynta bulshada waa in lagu dhaqaajiyaa ma aha oo kaliya diyaaradda, laakiin albaabka, inta lagu guda jiro hawsha raacitaanka, iyo baraha kontoroolada amniga.
Dib -u -qiimee maaskarada TSA waajibaadka kordhinta waajibaadka dadweynaha iyo habka faallooyinka.
Duulimaadyadu waxay ku ciriiriyeen rakaab tiro yar oo duullimaadyo ah oo aan lahayn fogeyn bulsheed, ma jiro xiritaanka kursiga dhexe, ma laha xaddid awoodeed, ma jirin hubinta heerkulka, iyo baaritaan COVID. In kasta oo qaar ka mid ah rakaabka ay ka soo horjeedaan maaskaro sababo siyaasadeed awgood, qaar kale waxay u arkaan la'aanta taxaddarro kale oo xagga amniga ah oo ay qaadeen shirkadaha duullimaadku (fogeynta bulshada, xannibaadda kursiga dhexe, hubinta heerkulka) iyo la'aanta fulin joogto ah oo ku aaddan rakaabka iyo shaqaalaha ka shaqeeya duulimaadka.
Dacwad -qaadidda bateriga ayaa loo baahan yahay marka dhacdooyinkani noqdaan kuwo rabshado wata. Si kastaba ha ahaatee, waxay noqon doontaa koror aad u daran iyo xad -gudub weyn oo ka dhan ah xorriyadda madaniga si loogu yeero fal -dambiyeedka Sharciga Waddaniga ah “faragelinta xubnaha shaqaalaha duulimaadka iyo shaqaalaha duulimaadka” ee loogu talagalay afduubayaasha iyo in loogu hanjabo rakaab ilaa 20 sano oo xabsi ah.
FlyersRights.org waxay u doodday xeerka maaskaro iyo sidoo kale tallaabooyin kale oo caafimaad si loo ilaaliyo rakaabka iyo xubnaha shaqaalaha. In kasta oo inta badan ka -hawlgalayaasha duullimaadku ay fuliyaan xeerka maaskarada sida ugu wanaagsan ee ay awoodaan duruufaha jira, ka -hawlgalayaal badan oo duulimaadyadu ma isku dayaan meel -marin oo iyaga laftoodu waxay jebiyaan xeerka maaskarada.
FlyersRights.org uma nisbeyn doonto falalka tiro yar oo ka mid ah adeegayaasha duulimaadka kooxda oo dhan. Si kastaba ha ahaatee, sida tallaabada fulinta looga qaadayo rakaabka diida inay xirtaan maaskaro, waa in tallaabo laga qaadaa shaqaalahaas duulimaadka ee ku xadgudba xeerka maaskarada ama aan samayn wax dadaal ah si ay u meel mariyaan xeerka. Kaliya maahan tani waxay yareyn doontaa daraasiin shilal rakaab oo karaahiya ah, laakiin waxay sidoo kale muhiim u tahay caafimaadka sii socda ee dhammaan rakaabka iyo shaqaalaha duulimaadka inta uu jiro masiibada.